Bhizinesi Dhibhodhi - Dhijitari Signage & Vhidhiyo Wall Software yeMabhizinesi
Metrics & KPI Scoreboard Ratidza kune chero bhizinesi
RATIDZIRA ZVAKO ZVAKAWANDA
Chengeta yako timu yakatarisisa pachinangwa uye ramba uri pamusoro ...
Kunyangwe iwe uine bhizinesi diki kana rakakura bhizinesi, Easy Multi Display inobatsira kuti iwe uite kuti timu yako irambe yakanangana nezvebhizimusi zvibodzwa zvako. Ratidza yako Mitero Yekutengesa, Hutano uye Dziviriro mamakadhi uye mamwe mabhizinesi analytics mune marongero ane musoro kunzwisisa kune timu yese.
Mune iyi Virtual Cockpit, yedu software yakawanda inoratidza inosanganisa PowerBI uye MicroStrindows dashboards kuti uvandudze yako yekuita sarudzo.
Ramba UCHITSVIRA - BATA TARGETS YAKO
Nemametric ako nemaKPI ari pakuratidzwa neEMD, iwe uchayeuchidzwa nezvezvinonyanya kukosha bhizinesi zvibodzwa zvako uye unozokwanisa kuona chakakodzera danho rekutora zuva rega rega.
Tenderedza YAKO YEMITSI
Kunyangwe timu iri kupfuura makwikwi kana ichirwira kuti irambe iripo, kuratidza zvikwata zvako kufambira mberi kuchinangwa kunozvibatsira kuti zvirambe zvakatarisana uye zvichikurudzirwa. Ratidza kunozivisa mibayiro iri padivi pemadashboard ako kuti uwedzere kukurudzira!
Ramba UCHIMHANYA HERE
Iwe unoziva zvavanotaura - kunze kwekuona, kunze kwepfungwa. Kupa timu yako kutarisa zvakavhurika pakuita kwavo zvikwata kunovapa mukana wekunzwa kubatanidzwa uye chikamu chechikwata!
Nekutenda kune yedu EMD Display, isu tinotaurira vatengi vedu nezvezvakasiyana zveinishuwarenzi zvigadzirwa zvatinopa. Ikodhi yezvigadzirwa zvedu iri kuwedzera kuve yakakura uye dzimwe nguva yakaoma kunzwisisa. Nekutsvaira kuburikidza neyeyu kambani pane EMD, vatengi vanoziva zviri nani nezve zvigadzirwa zvedu uye masevhisi.
Inishuwarenzi Broker, Namur
ChiChinese vhezheni iri kuuya nekukurumidza 🐼 Nyore Multi Displ
Tsoko iyi inotamba mitambo yemakomputa nekutenda chip
NeRinyore Multi Ratidza, iwe unogona kungoratidza yo
Ita Zvaunoda @guy_igr @lespassagersduvin @xuch
EMD inotamba hupenyu hwako hwese (Youtube, Twitch, nezvimwewo) 2
Takudzai More ... Tevedzera musi Instagram